Bhodhi idzva reZimbabwe Broadcasting Corporation nhasi raudza paramende kuti hurumende nemakambani ayo ndivo vari kukonzera dambudziko rekushaikwa kwemari kumbani iyi sezvo vasingabhadhari basa ravanoitirwa sezvinosungirwa kuitwa.
Vachipa humbowo maererano nezviri kuitwa nebhodhi ravo kugadzirisa matambudziko akatarisana neZBC pamwe nematanho ava rikutora kuagadzirisa, sachigaro webhodhi iri Dr John Tayi vati zvikamu makumi masere kubva muzana zvemabasa ekambani yavo zvinobva kuhurumende nemakambani ayo nekudaro kusabhadhara kwainoita ndiko kwopa kuti kambani iyi itatarike.
Vati kuti zvinhu zvifambe, hurumende inofanira kubhadhara basa rese rinenge raitwa.
Vatiwo marezenesi haana mari ine musoro yaari kuunza mukambani iyi sezvo mari inobhadharwa iri shomanana uye yakapedzesera kukwidzwa makore gumi apfuura.
Semuenzaniso vati mabhisimisi anobhadhara zana remadhora pagore vanhuwo zvavo vachibhadhara makumi matatu emadhora chete
Dr Tayi vati nyaya yekuenda kwemagetsi yave kuita kuti vanhu nemakambani vatadze kushambadza nenhepfunyuro dzeZBC izvo zviri kuita kuti kambani iyi irasikirwe nemari yakawanda.
Vatiwo chimiro cheZBC chakasviba nekuda kwenyaya dzezvikwereti, huwori nezvimwe zvekuti vatove mushishi rekuzvigadzirisa.
Vaenderera mberi vachiti zvinhu zvinogona kutonyanya kuipira ZBC nekuti kuvhurwa kwemaisai kunoreva kuti pachave nemakwikwi kubva kune makambani achapihwa marezenisi neBroadcasting Authority of Zimbabwe.
Asi kunyange hazvo vataura zvichemo nezvari kuita, nhengo dzekomiti yezvekuburitswa kwemashoko dzati bhodhi iri rinofanira kuchinja maitirwo ebasa kuZBC.
Imwe nhengo yekomiti iyi, VaSimbaneuta Mudarikwa, veZanu PF vati havaone chikonzero chekuti vashambadze neZBC nekuti vashandi vacho kusanganisira vatapi venhau havagone kuita basa zvine hunyanzvi.
VaSettlement Chikwinya veMDC vatiwo zvinosvibisa chimiro cheZBC inyaya yakaita sekuti vamwe vatapi venhau vayo kusanganisira vamwe vakuru vakuru vanomboita zvematongerwo enyika zvakaita sekupinda musarudzo dzemumapato vodzoka kubasa kana vachinge vakundwa.
Asi Dr Tayi vati havawone chakaipa pane izvi sezvo mutemo wenyika uchibvumidza vanhu kupinda musarudzo.
Mukuru wesangano reMedia Institute for Southern Africa, VaTabani Moyo vaudza Studio 7 kuti havabvumirane nenyaya yekuti vatori venhau vanopinda musarudzo vachidzoka zvakare kumabasa avo kana vakundwa.
Vatiwo chimwe chavanoda kuona bhodhi idzva richiita kurumura ZBC kubva kubazi rezvekuritswa kwemashoko.
Nhengo dzekomiti iyi dzange dzichidawo kuziva kuti bhodhi iri richaita sei kupedza kupindira kwebazi rekuburitswa kwemshoko kukambani ZBC uko kunonzi kunoitika zvakanyaya.
Dr Tayi vati bhodhi ravo richadyidzana nebazi ravo asi vakati havasi kuzobvuma kuitiswa zvinhu zviri kunze kwemutemo.
Sachigaro vekomiti iyi, VaPrince Dubeko Sibanda vaudza Dr Tayi nechikwata chavo kuti vakazvipira kubatsira ZBC kupedza matamabudziko ayo.
VaSibanda vatiwo vanoda kuona bhodhi reZBC iri richigadzirisa ZBC kuti iite zvido zveveruzhinji nekutevedza bumbiro remutemo wenyika iro rinoti kambani iyi inofanira kushanda isina divi rayaka rerekera.
Mubhajeti yegore rino hurumende yakaisa parutivi mari inodarika mamiriyoni matanhatu emadhora ekutsigira ZBC.
Gurukota rezvemari, VaMthuli Ncube vanoti mapazi nemakambani ehurumende anofanira kubhadhara basa raanenge aiitirwa neZBC kuti kambani iyi ikwanise kuita basa rayo nemazvo.